Iran: Fisamborana sy Fandravàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2017 7:40 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, عربي, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Mpikambana ao amin'ny Foibe Ara-kolontsain'ny Vehivavy i Maryam Hossienkhah. Mpikambana mavitrika ao amin'ny Fanentanana Sonia Iray Tapitrisany ihany koa izy. Nosamborina izy andro vitsy monja taorian'ny fanakatonana ny tranonkalan'ny Foibe Ara-kolontsain'ny Vehivavy noho ny didin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika sy ny Fitsarana.
Change for Equality (Fiovana ho an'ny Fitovian-jo) nanoratra tamin'ny 17 Novambra:
Negarka nilaza [Fa] hoe: “Avotsory i Maryam Hosseinkhah, tovovavy mahery fo izay vao avy nanoratra ho an'ny fahalalahana, ny rariny sy ny voninahim-pirenena izy.”
Farideh Gheyrat, mpitsara kosa nilaza [Fa] fa tsy ara-dalàna ny fisamborana azy. Iray amin'ireo mpisolovava i Shirin Ebadi, mendrika tamin'ny Loka Nobel.
Mohammad Ali Abtahi, filoha lefitry ny Iraniana reformista teo aloha, nilaza [fa] hoe:
Nilaza [Fa] i Azad Nevis fa tsy mikasika ny foto-kevitra na ny finoanan'izy ireo no antony mahatonga ny governemanta manao famoretana amin'ny Sufism. Nilaza ity bilaogera ity fa manao famoretana amin'izay vondron'olona mahavita mifandamina sy manana mpitarika ny governemanta Iraniana.